IFom kwiSisombululo sePDF usebenzisa iFomstack kunye neWebmerge
Ngokuzenzekelayo Inkqubo yokuDalwa kwePDF ngeWebMerge
NgoLwesithathu, nge-23 kaJanuwari 2013 NgoLwesihlanu, Februwari 27, 2015 Douglas Karr
Bendindwendwele nomnye wabaxhasi betekhnoloji 'IFomstack) abathengi izolo ukuxoxa ngokudityaniswa okuhle abebesebenza kuko. Into endichukumisileyo kukuba eneneni uninzi lokudityaniswa kugqityiwe nangona babengenazibonelelo zophuhliso kubasebenzi babo.
Inxalenye enkulu yenkonzo yabo yayineefom ezigqityiweyo ngabasebenzi bezentengiso, amathemba okanye abathengi. Iziphumo zokugqibela yayizii-PDF ezithile ekufuneka zizaliswe ngokufanelekileyo kwaye zisiwe ngombane kwiinkampani zamaqabane abo. Bayifezekisile le nto ngaphandle kokusebenzisa IFomstack kunye neWebMerge. PhakathiIFomstack ujongano lomsebenzisi olulula lokuphuhlisa iphepha lemibuzo… kunye nokukwazi kweWebMerge ukwenza imephu yedatha kunye nokukhupha iPDF… inkqubo isebenza ngokungagungqiyo.
kunyeIFomstack Ukudityaniswa kweWebMerge ungenza amaxwebhu ePDF kwifom yokungeniswa, uthumele izaziso ze-imeyile ezizenzekelayo, kwaye ngokuzenzekelayo uthumele amaxwebhu e-PDF agqityiweyo. Olu ludibaniso olomeleleyo ngokwenene olunokuvumela ishishini ukuba lenze ngokulula amatikiti omnyhadala, iikhontrakthi, izivumelwano zengqesho… uyinike igama!
Ngokuzenzekelayo inkqubo yokudala uxwebhu ngokuzenzekelayo ukuvelisa amaxwebhu ePDF kwifom yakho yokungenisa. Ukuseta kuyakhawuleza kwaye kulula.
tags: ukungeniswa kwefomifom kwi-pdfiifomuindlela yobumeTechwebmerge
I-TinyLetter: Akukho zincwadana ze-imeyile ze-Frills
Jan 24, 2013 kwi-5: 18 AM
Ngaba inkqubo enje isebenza "ngokungenasiphako" kanye njengokuba ubhalile?
Jan 24, 2013 kwi-9: 06 AM
Ewe ndimi ekusebenziseni kwam igama. 🙂